I-Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 ukuqhathanisa
Embonini esafufusa yama-scooters kagesi eminyakeni yamuva, akungabazeki ukuthi izithuthuthu zikagesi ze-Xiaomi ziyiziqalisi zemboni kanye nomkhiqizo owaziwa kakhulu emakethe, kodwa abanye abakhiqizi abaningi baye balandela futhi benza ukuthuthukiswa okwengeziwe kwemikhiqizo yesikuta sikagesi. Ukuthi abantu banezinketho eziningi zokuthenga izithuthuthu zikagesi. Ngakho-ke manje, Thatha iMankeel Steed yethu njengesibonelo, futhi wenze ukuqhathanisa ne-Xiaomi Pro2 ngentengo efanayo. Ini ...
I-Mankeel electric surfboard W7 yethulwe ngokusemthethweni ngesizini yokuthengisa yasehlobo ka-2022
Njengenkampani yezobuchwepheshe esungula izinto ezintsha, ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho okunqwabelene embonini yesikuta sikagesi, sasungula futhi sathuthukisa elinye ibhodi elintantayo likagesi ngonyaka odlule eliletha injabulo eyengeziwe kubantu ---- I-Mankeel Electric Surfboard W7. I-Mankeel W7 yamukela umklamo omusha odidiyelwe, ukubukeka okukhanyayo nokuncane, indawo ebushelelezi ehambisana nobuso bamanzi, iyenze ihambe kahle emanzini, futhi kulula ukuyithwala, ukujula kwe-diving kufika ku-50m, al...
Iphephabhuku lase-Italy i-Sardabike libuyekeza ividiyo ye-YouTube ye-Silver Wings
Ividiyo yokubuyekezwa ethathwe iphephabhuku lase-Italy elibuyekeze izithuthuthu zethu zikagesi zeSilver Wings ngaphambili manje isilayishwe ku-inthanethi, sicela uchofoze ividiyo engezansi ukuze uyibukele ekhasini lethu lezindaba, Thola umbiko wethu wezindaba onesihloko esithi "Umagazini wamabhayisikili wase-Italy i-Sardabike MTB ubuyekeza i-Mankeel Silver Wings" eshicilelwe ngo-Agasti 2, 2021 ukuze uyihlole.
Ama-blogger e-YouTube aseFrance abuyekeza i-Mankeel Silver Wings
Ividiyo entsha yokubuyekeza i-MK006 isilapha futhi. Lesi sikhathi yividiyo ebuyekeziwe ye-French Youtube Blogger ZERORIDE. Uma kuqhathaniswa nama-blogger adlule abuyekeze izithuthuthu zethu zikagesi, ividiyo ye-ZERORIDE ivamise ukugxila ezicini zokusebenza ezingokoqobo ezifana nebanga lokubhuleka. , ukugibela ukuhlolwa kwerenki okududuzayo ngaphandle kwendawo eyisicaba nokunye. Siyakwamukela ukuchofoza ividiyo engezansi ukuze uyibuke ngqo Ngokufanayo, njengoba sishilo esihlokweni sokugcina sezindaba ze-blogger ye-youtube yase-US, sizoba...
Ukubuyekezwa kwe-Youtuber waseMelika uMankeel Silver Wings
I-youtuber yochwepheshe be-American scooter kagesi ebuyekeza i-youtuber, i-ID yesiteshi Izimoto zikagesi ezisanda kuhlolwa futhi zabuyekezwa ku-scooter yethu kagesi i-Mankeel Silver Wings. Isiteshi se-YouTube se-blogger ekuqaleni besigxile ezikhungweni zikagesi ezinamandla angaphandle komgwaqo, kodwa lapho ebona umklamo wethu wangaphandle omuhle nomuhle we-Mankeel Silver Wings nokusebenza okuvelele, ngokushesha waba nesithakazelo ekuhlolweni kwalesi modeli yesikuta sikagesi. Futhi ngemva kokuthola nokuhlola i-e...
Umbukiso obukhoma we-International eCommerce Supply Chain Fair ngoSepthemba 23
Ngomhla zingama-23 kuSepthemba 2021, sizobamba iqhaza embukisweni we-e-commerce wamazwe ngamazwe, ozoqala ngoSepthemba 23 kuya kuSepthemba 25. Inombolo yethu yedokodo yi-B8102-B8103. Uma kungenzeka use-Shenzhen, wamukelekile ukuthi uvakashele umbukiso wethu, uhlole imikhiqizo, futhi uxoxe ngokubambisana. Ngaleso sikhathi, Sizokwenza ukusakaza bukhoma ku-inthanethi ngoSepthemba 23 ekuseni ngosuku lokuqala lomcimbi. Wonke amakhasimende amasha namadala amukelekile ukuthi eze azobuka. Senza okuhlukile...
I-imeyili: sales@mankeel.com I-imeyili: support@mankeel.com